आइफोनको पैसा तिरेर अनलाइन सपिङ गर्दा घर आइपुग्यो साबुन ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/आइफोनको पैसा तिरेर अनलाइन सपिङ गर्दा घर आइपुग्यो साबुन !
आइफोनको पैसा तिरेर अनलाइन सपिङ गर्दा घर आइपुग्यो साबुन !
पछिल्लो समय अनलाइन सपिङले राम्रो बजार पाएको छ । व्यस्त जीवनशैलीका कारण मानिसले अनलाईन अर्डर गरेर सामान मगाउने गरेका छन् । त्यतिमात्र होइन बजारमा हुने भीडभाडबाट बच्नका लागि पनि यो उपाय राम्रो देखिएको छ । तपाईले पनि बेलाबेलामा अनलाइन सपिङ गर्ने गर्नु भएको होला ? विचार गर्नुस् ५५ हजार तिरेर आइफोन अर्डर गर्दा घरमा साबुन आइपुगेको यो घटना जस्तै हुन पुग्ला !
घरमै बसेर अर्डर गर्दा सामान आउने भएपछि गमी, धुवाँ धुलो सहेर बजार जान पनि परेन । तर कहिलेकाही यस्तो अर्डरले समस्या पनि निम्त्याउने गरेको छ ।
एक जना व्यक्तिले घरमै बसेर अनलाइनमार्फत आइफोन अर्डर गरेका थिए । तर उनको घरमा आइफोनको सट्टा लुगाधुने साबुन आइपुग्यो । तर उनले उक्त साबुनको पैसा भने आइफोनकै मूल्यबराबर तिरे ।
सुन्दा तपाई अचम्ममा पर्नुभयो होला तर यो समाचार नेपालको भने होइन । यो घटना छिमेकी मुलुक भारतको हो जहाँ एक जना व्यक्तिले अनलाइन सपिङ मार्फत आइफोन मगाएका थिए । घरमा सामान पनि आयो र उनले पैसा पनि तिरे । ५५ हजार रुपैयाँ अनलाईनमार्फत तिरेका उनको आइफोन एकाएक साबुनमा परिणत भयो ।
भारतका २६ वर्षीय एक सफ्टवेयर इन्जिनियरले अनलाइन शपिङ साइट फ्लिपकार्ट मार्फत् आइफोन(८ अर्डर गरेका थिए । त्यसको लागि पैसा पनि अनलाइनमार्फत् नै भुक्तानी गरे । तर, घरमा आइदियो आइफोनको सट्टा लुगा धुने साबुन ।
आइफोन खरिद गर्ने तबरेज मेहबुब नाग्रलीका अनुसार उनले आईफोन ८ को लागि ५५ हजार रुपैयाँ अनलाइनमार्फत् नै भुक्तानी गरेका थिए । तर घरमा भने लुगा धुने साबुन डेलिभरी भएको दाबी उनको थियो । यो केही समय अघि अर्थात जनवरीको घटना हो ।
उनले आफूलाई ठगेको भन्दै फ्लिपकार्टविरुद्ध मुम्बईको बिकुला प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए ।
खुशीको खबर ,हङकङले बनायो कोरोना भा’इरसको खो’प !
घरभाडा छुुट दिनेलाई घरधनीलाई पुरस्कार दिइने